Amboasary Atsimo : dahalo 800 lahy nitolo-batana | NewsMada
Amboasary Atsimo : dahalo 800 lahy nitolo-batana
Dahalo miisa 800 no nentin’ny fianakaviany sy ny ray aman-dreniny niaraka tamin’ireo mpiray dina nitolo-batana teo anatrehan’ny zandary, ny zoma teo tany Marohary Amboasary Atsimo. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritra faritra Anosy ny Kly Ranaivoarison Théodule, nahazo fanasana izy ireo, ny herinandro teo fa hitolo-batana ireo dahalo mpanao fanafihana amin’iny faritra atsimo iny toy ny any Nanarena, Maherivoro, Bekirobo.
Tsiahivina fa telo herinandro lasa izay nifanehatra tamin’ny dahalo tany Marohary ny zandary ka nahalavo ireo dahalo miisa 11. Nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny fusil lance grenade ny zandary nandritra ny fifandonana tamin’ireo dahalo ireo.
Taorian’izay, nangataka fifampiraharahana tamin’ny zandary ny fianakavian’ireo dahalo amin’ny hampijanonana ny fifampitifirana. Notanterahina ny zoma teo, araka izany, ny lanonana ka nanolotra omby ny zandary ho fanamarihana izany. Hiverina eny anivon’ny fiarahamonina misy azy kosa ireto dahalo nitolo-batana ireto. Tsiahivina fa efa nisy dahalo anarivony maro no efa niova fo taona vitsy lasa izay ka noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fiahiana azy ireo.